IDorna iyonwabisa ngeMotoGP yokujonga abaphulaphuli ngeViz Arena ebonakalayo kunye nemizobo yokwenyani eyongeziweyo | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » UDorna uchulumancisa ukubukela abaphulaphuli ngeViz Arena ebonakalayo kunye nemizobo eyinyani eyongeziweyo
I-MotoGP ™, eyona njongo iphambili yokubaleka izithuthuthu emhlabeni, inabakhweli abakhokelayo kwihlabathi kunye nezona zithuthuthu zihambele phambili kwezobuchwephesha kwaye zikhawulezayo, ngababukeli abenza imincili kumabonwakude nangakumbi ngemizobo eqingqiweyo kusetyenziswa isoftware yeViz Arena evela Vizrt.
I-Viz Arena iphucula ukuhanjiswa kwezemidlalo ngexesha losasazo olwenziweyo kunye nemizobo yokwenyani eyongeziweyo emileyo ebaleni, phantsi kwabadlali ebaleni, okanye kwimeko yeMotoGP, kwindawo yomdyarho womdyarho.
UDorna, umnini welungelo lokuthengisa kunye nomabonakude we-MotoGP kunye nobunye ubuntshatsheli bokubaleka kwezithuthuthu, waqala ukuzama iViz Arena ekupheleni kwexesha le-2019. Ngaphandle kokukhutshwa kwezicwangciso zokulibaziseka kwalo bhubhane, iMotoGP ibuyile kwizikrini ngoJulayi kunye neViz Arena isetyenziswa kwasekuqaleni kusasazo ngqo.
“Abalandeli bethu banqwenela idatha yexesha lokwenyani ngexesha leembaleki ezinceda ukubalisa ibali elivelayo kwingoma. Libaluleke njengalo gqatso ngokwalo, ”utshilo USergi Sendra, uMlawuli oyiNtloko, uMxholo weMedia, amaSebe obuGcisa kunye neMveliso eDorna. "IViz Arena isinceda ukuhambisa oko ngendlela ebonakalayo enika ulonwabo ngakumbi kubaphulaphuli bethu."
"Ukuphuculwa kwemizobo ebonakalayo kunokusetyenziswa kwiViz Arena kuwo nawuphi na umcimbi wezemidlalo," utshilo UJonathan Roberts, intloko yeHlabathi Vizrt Sports. "Inkqubo yokulinganisa kunye nokuhamba kwemizobo kulula ngokufumana uqeqesho oluncinci kubaqhubi."
IViz Arena iqesha ngokungalinganiyo kwaye yomelele ukulandela umkhondo wekhamera kunye nokuqhutywa kwemifanekiso ukuhambisa ixabiso kubaxhasi Obu buchwephesha benza ukulandelwa kweekhamera ngexesha langempela, ngokusekwe kwividiyo kuphela kwaye yenza ukuba kube lula ukufaka imifanekiso yemizobo yesitudiyo. Ngaphandle kwesidingo seentloko zokulandela umkhondo ngoomatshini, iViz Arena ihambisa iziphumo zoqhankqalazo zokonga iindleko kunye nezixhobo kodwa, okona kubaluleke kakhulu, ukunciphisa ibala lemidlalo okanye indawo yonyawo. Ixabiso lokuhambisa isoftware emsulwa kunye nezisombululo ezisekwe kwimifanekiso ziyonyuka ngexesha lobhubhane oqhubekayo njengoko ivumela abathengi ukuba bavelise umxholo ukude ngaphandle kokufuna abantu okanye izixhobo kwisiza.
Ngakumbi malunga nokuba njani VizrtIimveliso zokubalisa amabali ezichaziweyo zesoftware zivelisa ukonwaba kombono weMotoGP ngeDorna, cofa Apha kwaye Apha. IViz Arena ihambisa ngesithembiso 'samabali amaninzi, ukubaliswa ngcono,' injongo ka Vizrt Iqela.
Previous: Umnyhadala woNcwadi waseCheltenham oNikwe amandla yiBlackmagic Design
next: I-HPA ibhiyozela isikhumbuzo se-15th sokuhlonipha ubuGcisa kunye noBuchule